Soomaali — Representative Ilhan Omar
Assalama Caleeykum waa Raxmatullahi waa Barakatu
Magacayga waxa la yiraahdaa Ilahaan Cumar, waxaan ahay gabar Soomaliyeed oo u tartameysa kursiga Baarlamanka Gobolka Minnesota, Degamada 60d. Ruunti aad baan ugu faraxasanahay in aan ka mid ahay loolamayasha jagadan.
Waxaan amiinsanahay in bulshadeena ay u baahan tahay qof aad u firfircoon oo tiigsanaya siyaasada, dhiiranna, horumar, cadalad iyo sinaanna u heegan. Sidaas awgeed ayaan ugu tashaday in aan u tartamo jagadan.
Haddaan xooga idin la waddaago taariikhda noloshayda, reerkeyga waxay yimaadeen Mareykanka anigoo fasalka lixaad dhigta. Maadama aanu ahayn qoys aabee kaliyi wado, aabeheen wuxuu aad ugu dedaaley sidii aan ugu noolaan lahayn gobol waxbarsho iyo dhaqaalo fiican leh , isla marakane u roon ajaanibka. Sidaa awgeed ayaan u soo guurnay Minnesota. Aad baan ugu faraxsanahey in aabe inoo dooray Minnesota,waayo waa ku liibaney. Waxbarashada wanaagsan ee gobolkeena iyo dhiiri gelinta bulshadena ayaana ii surta gelisay in aan waxbarashada meel fiican ka gaaro oo aan ku guulesto labo shahado oo bajular ah anigoo isla markaas qoys cusub noqday. Waxaan raaba inaan huruumarka uu Illahey ii fududayey la wadaago bulshada.
Taas waa arrin muhiim ah oo tix raaceysa caado lagu yaqaano Maraykanka iyo Minnesota. Taas oo ah in shaqsi walba oo raba in uu horumar gaaro ay u furan tahay fursad balaarani, iyada oo aan la fiirinayn meesha uu qofkaasi asalkiisi ka yimid ama uu ku dhashay. Waxaan rajenaya haddii uu Ilahey fursad ii siiyo jagadan gobolka, in aan noqon doono qof matala, una hadla fursadahan fiicfiican.
Howlaha bulsho ee isoo maray, ha ahaato mid cilmi ii faa'iideya ama u adeega danaha dadweynaha, dhamaan waxa aan ka bartay in aan wax badan aan qabsan karno. Markaan ka gudubno arin qoys, oo aan fursad siino dad cusub oo fikrado cusub wata waa ficil ina gaadhsiin kara guulo waaweyn.
Waxaan aaminsan ahay dumquraadiyaddu inay u furantahay qof walba.
Waxaan aad ugu hanweynahay guulaha ay degmadani muujineyso. Ha ahaato horuu socodnimo, qiimo iyo qadaritan deriska, iska warqabida iyo dadka oo raba in ay wax wada qabsadaan. Waxaan isku wada raacsannahay in ay muuhim tahay in caruurteenna ay ku saanqaadaan dedaal xoogan, in qoysaska caafimadkooda la daryeelo, in xaafadda ay nabad tahay iyo waxbarasho qiimo leh. Laakiin waxaan aaminsanahay in ujeedadeena aan gaari karno marka aan adeegsano awooda isku duubnaanta ama wada jirida. Degmadeena waxay u bahantay wakiil ka turjumi baahida xafadda, balan qaadana in qofwalba codkisa fursad la siiyo oo la maqlo.
Waxaan ku han weynahay inaan dhamaantiin idinla shaqeeyo si aan u geeyo qiimaha iyo qaayaha degmadeena baarlaamka gobolka.